Somalida Linköping oo la kulmay Xubno ka tirsan Migrationsverket | Somaliska
Somalida ku noo Gobolka Östergötland gaar ahaan Linköping ayaa la kulmay sadex xibnood oo ka socotay qeebta Laanta Socdaalka Sweden (Migrationsverket). Sadexdaan xibnood oo kala ahaa Inger Lagersköm oo ka shaqeneysay Migrationsverket ilaa 1997 iyo Kavin oo ka shaqeneysay 1999 iyo sidoo kale Johan Bjulback oo ka shaqenahay ilaa 2007.
sadexdaan xibnood oo aan wax la taaban karo ka sheegin meesha ayaa waxeey warka ku soo gaban gabeeyeen ayagoo sheegay in aay arintaan dusha uga fadhiyaan Maxakamada sare ee Dowlada sweden iyo wasiirka socodaalka Tobias Billström.
Qodobada aay soo qaateen ayaa waxaa ka mid ahaa Go’aanka maxkamadda ee soo baxay 12 Maj 2011 waxuu la mecne yahay in qof kastoo ka soo codsanay Sharciga degenaashaha dalka asagoo dibada jooga si uu ula noolaado qof ku nool dalka Iswiidhan waa inuu cadeeyaa Jinsiyada uu yahay taas oo ku xiran Baasaboor la aqoonsanyahay.
Aqoonsigiisa inuu muujiyo qofka uu yahay taasi waxey la mecne tahay in haddii aan lafulin dalabka xaqiijinta aqoonsiga Shakhsiga waa in Laanta socdaalka jawaab diidmo ah ay ka bixisaa codsiga sharciga degenaanshaha, iyadoo Laanta Socdaalka aysan sidoo kale sii baadhi doonin in qofka qaraabo ku leeyahay dalkan Iswiidhan.
Hadalka ay ka dhawaajiyeen xubnaha ka socday Laanta Socdaalka ayaysan ku farxin waalidiintii iyo waxgaradkii Soomaaliyeed ee ka soo qayb galay kulanka.
Shirkaan oo aay soo qabanqaabiyeen somalida ku nool Llinköping, waxuuna socday shirku mudo dhan labo saacadood ayadoo la weydiiyay xubnaha ka socday Migrationsverket su’aalo mahiim ah haseyeeshee waxba kama soo naaso cadaan.
Siyaad cabdi cali (Joker)
Tirada magangalyo doonka oo kala bar hoos u dhacday
Walaalayaal migrationsverket waxba ma qaban karo ayadoon dowlada dalkaan Sweden wax ka badalin sharciga reeraha. waxaana wax ka badali karo Maxkamada sare iyo
Baarlamaanka oo kaliya. Xisbi walaa wasiir walaa koox waxba kama tari karaan.
Walaalayaal yaan waqti leyskaga dhumin qoladaan sugitaankeeda ee qof waliba reerkiisa xal ha u raadsado allaha weyna aan talo saarano isagaa awood leh.
Waxaan u mahadcelinyaa walalaaha reer Linköping waxeey mujiyeen dadaal.
aniga waxaan qabaa cidaan iney waxba ka badaleynin go,aankooda , marka qof walba iney reerahooda xal kae o raadsadaan , ilaahey hanoo nabadeyo somalia ,somalia dalkeeda ha dhisato ayaan leeyahay ha is jeclaato qabiilka ha iska deeyso ,sweden dalkooda yey dhisteeyn maxaa u tuugeysiin maa dhisatiin dalkiina
June 9, 2011 at 14:12
Waxan qabaa aniga familka runta ah oo aan kalamarmin sikastaba hakuqadate sweden halagusogaliyo qabab kale oo xata tahrib ah ilen qofna kama marmo familikisa e sweden yan lala tashan e halaga tashto
sweden waxa inomahayso ee alle ayaa wax ino hayo marka hore tas ogada aqyarta marka maqasho waxa laga raba cadeyn waad daremi karta waxa eey wadan waayo somaliya aqonsi malaha mana heli karno lkn ayaga waxey noga dhigayan caqabad aan kaso tilabsan karin balse aniga ahl ayaan ogahay taso ah in alle waxu qadaro cid gacan u dhigi karin idinkana ila mid noqda inshaa allh weyn dhamaneysa marxaladan hada tagan
waa run ilaahey uunbaa wax inoo qaban karo qaddartana isaga ayaa iska leh, balse waxa la yiraahdaa (man jadda wajada. oo macneheedu yahay doonte magaciisu waa hele, ama dadaalaahi wuu gaaraa dantiisa, sidaas darteed, waxaa nala gudboon in aynaan u dhaqmin ama u hadlin sidii dad quustay ee waxaa nagu waajib ah inaan laba jibbaarno dadaalka iyo dagaalka aan ugu jirro xaqeenna, waana in aynaan illaawin dantayada iyo ehelkeenna isla markaana aynaan ka tanaasulin xaqqeenna. Waa inaan baarlamaanka teendho ka hor dhisanno ururrada soomaalida oo uu ugu horreeyo ururka somaliska riksförbundetkuna waa inay laga billaabo hadda u raadiyaan oggolaansho bil ah (ugu yaraan) bannaanbaxa teendhada, waad arki doontaan raadka ay reebto iyo guusha ka dhalata haddii xaajada wadnaha laga abbaaro, ogaadana waxaa lagu maahmaahaa (nimaan hadlin Hooyadiisna wax ma siiso) waa in loosoo tafa xeyto dagaal dhab ah. wey mahadsan yihiin reer Linköping iyo dhammaan cid kasta oo wax isku dayda.
June 11, 2011 at 17:02
Somalidi beentodi ba badatey iyo khiyaamadi, waxaas o dhib ah iyaga isugu wacan.